HomeTURKEYGobolka BanaadirCiidamada 52Çambaşı Ski Center Diyaarinta Xilliga
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş Ciidamada 52, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER 0
goobta ciyaaraha barafka ee cambasi ayaa isu diyaarineysa xilli ciyaareedka
Turkey ayaa Çambaşı kala soocin cajiib ah isagoo ugu dhow in ay badda isku diyaarinaya xilli ciyaareedka soo ski Ski 2019-2020.
Çambaşı Ski Center oo ku taal 2000 acres oo joog ah dherer ah 650 oo ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaalada Ordu waxayna ku taalaa masaafo dheer xNUMXkm oo u jirta bartamaha magaalada; Afar xilli xilli Hotel, Çambaşı Hotel, Slalom Café Restaurant, Zirve Café, cunnooyin cunto fudud, qolal baraf ah iyo qolal toboggan ah ayaa loo diyaariyey xilliyada qaboobaha.
Xarunta dabiiciga ee "şıambaşı Nature Facility", oo ay ugu jecel yihiin dadka jecel barafka ee gobolka, sameynta dariiqyo cusub, biyo-dhajisyo, dayactir kursi, hadiyado meelaha la isugu yimaado, dayactirka biyaha dushooda iyo howlo kale oo badan ayaa la fuliyaa.
Xilliyadihii la soo dhaafay, nashaadaadka orodka leh ee soo jeedinta xilli ciyaareedka cusub ayaa la qorsheeyay in la keeno xilliga qaboobaha. Çambaşı Ski Center, oo u adeegi doonta marinnada maxalliga ah, kuwa qaran iyo kuwa caalamiga ah, ayaa sidoo kale martigelin doona tartamada lagu qaban doono heerka qaran.
Xilliga barafka ee Skiers 2019-2020 waxay yeelan doonaan xilli xiise leh oo leh tabaha cusub iyo tas-hiilaadka cusub ee bulshada maalin walba.
Xarunta Badbaadinta Skiingka ee Xarunta Dhexe 15 / 09 / 2016 Cibiltepe Ski, Season Ciyaaro of Diyaarinta: Cibiltepe Ski Center ee degmada of Kars Sarikamis dhexeeya xarumaha dalxiiska jiilaalka muhiimka ah ee Turkey, ayaa isku diyaarinaya xilli ciyaareedka ski ah. galku Duqa Sarikamish ee miciinka ski ah Göksal Toksoy, ku yiri hadal uu u sheegay suxufiyiinta, ayuu sheegay in si dhakhso ah ay sii wadaan shaqada. Erzurum ka hal dhinac ", Erzincan iyo Kars Winter Dalxiiska Corridor" Mashruucan, nidaamka bullaacadaha, line ururinaysa, xarunta daaweynta biyaha wasakhda, xarunta ganacsiga, meesha kulan barafka, shaqada muuqaalka waxaa loo sameeyaa, Toksoy sheegaya dhinaca kale hagaajiyo jidka ski ah " Sarikamis waxay socotaa laba sano iyada oo maal-galiya dowlad-goboleedyo iyo kuwo gaar loo leeyahay Sar
Xarunta Bayraktepe Ski Diyaarinta xilliga Jiilaalka 18 / 11 / 2013 Diyaarinta Bayraktepe ku Season Winter Ski: Saraakiisha Bayraktepe in Sarıkamış Ski Center, taas oo ah mid ka mid ah jiga waaweyn Turkey ee ski, waxay bilaabeen diyaar garowga xilli qaboobaha. Bartamaha Bayraktepe Ski, oo loo yaqaano baraf cad, oo ka mid ah kaymaha geed jaalaha ah, shaqooyinka farsamada farsamada iyo wadiiqooyinka socodka ayaa xawaarey. Guddoomiyaha Gobalka Maxamed Goobbe, oo ah AA, ayaa ku sheegay bayaan ka hor xilli-xilliga qaboobaha ka hor inta aan la hagaajinin dayactirka waddooyinka iyo dayactirka dhismooyinka iyo diyaarinta, ayuu yidhi. Sarikamish iyo maalgashiga lagu sameeyo marka la eego dalxiiska xilliga qaboobaha oo mashaariic Gurbuz sheegaysa waxaa jiri lahaa xiddiga Turkiga oo ifaysa, "macnaha Winter of shaqo diyaarinta iyo 8 9 buux runway oo camal dheellitir ...
Diyaarinta Xilliga Jiilaalka ee Sarıkamı Ski 18 / 09 / 2019 Guddoomiyaha agoonta Kars Turkiga, taas oo uu noqday xiddig ka ifaysa dalxiiska jiilaalka Turkey iyo baaritaan 2019-2020 helay Sarıkamış Ski Center darbay xilli qaboobaha. Guddoomiyaha agoonta Turkiga, marka hore sida dhismaha sii iyo Turkey oo kaliya Sarıkamış Ski Center oo loo gelin doonaa adeegga fadhiga nidaamka u xiran yihiin oo 6 kursi la saacadood 3 kun oo qof awood u leh qabashada nidaamka wiishka ski cusub ee 2 kilomitir oo dherer ah, qalab farsamo, nalalka iyo 4 kilomitir oo dherer ah ee ku ordaana Dhismaha cusub ee loo yaqaan 'slalom runway' iyo maamulayaasha ayaa lagu wargaliyay shaqadii la qabtay. Gudoomiyaha ayaa markaa dhisay Kütük Ev oo leh hoy, kafateeriya iyo qaybo qol baraf ah.
Yildiz Mountain waxay isku diyaarineysaa xilliga barafka cusub 27 / 07 / 2015 Star Mountain waxay diyaarineysaa xilliga barafka cusub: Diyaargarowga ayaa socota si loo kordhiyo heerka wadada iyo tayada Xarunta Dalxiiska ee Tour Mountain Winter xilli ciyaareedka cusub. Sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo Maamulka Sivas Gaarka ah ee Gobolka, Xoghayaha Guud ee Maamulka Saalax Ayhan, baadhaya shaqada ay xarunta wadada iyo ski ah, in uu helay war ka soo masuuliyiinta. Ayhan loola jeedaa maamulka shuqullada wadada, oo ku yaalla inta u dhaxaysa mashruuca haybadda leh ee hay'adda Star Mountain Winter Sports ayaa sheegay in sii hawlahooda si loo horumariyo heerka iyo tayada wadada Xarunta Dalxiiska. Hot Cermik iyo wadada 82 u dhexeeya garoonka diyaaradaha iyo xarunta oo bixinaya macluumaad ku saabsan wadada Ayhan, qorshaha horumarinta waddooyinka
Isu diyaarinta xilliga Erciyes Ski 14 / 11 / 2015 Diyaarinta ku Season Erciyes Ski, xilli cusub si ay isugu diyaariyaan jimicsi goobidda iyo samatabbixinta lagu qabtay Erciyes Ski Center. Xarunta Erciyes Ski, waxaa la sameeyey layli goobid iyo samatabbixin ah si loogu diyaar garoobo xiliga cusub. Erciyes ee degmada Kayseri Metropolitan xaaqiijiyay raadinta, gurmadka iyo track ammaanka la Search Kalkaalinta iyo Samatabbixinta (Jak) layli qaadeen si wadajir ah in kooxda ku xanibmeen seenyo baabuur cable waa 8 skier la badbaadiyay la socod guul. script ayaa ugu baaqay dadka Hisarcik 8 helay iridda baabuur cable lagu joojiyey sabab u ah cillad farsamo ka dib markii baabuur-wadidda in muddo ah. Kooxuhu waxay heleen ogaysiinta in gaariga fiilada, uu yimaado goobta sida ugu dhakhsaha badan. Kooxaha qaata tallaabooyinka amniga iyaga oo samaynaya go'aanka goobta, m